जब महिलाले महिलालार्इ नै बलात्कार गरे ! « Deshko News
जब महिलाले महिलालार्इ नै बलात्कार गरे !
भोलिपल्ट समाजमा कुरा चल्यो यमुनाको प्रेमी केटा हैन केटी हो। सुरुमा पत्यार नभए पनि लाक्पाको शरीर परीक्षण भयो। शरीर परीक्षणमा लाक्पा केटी भएको प्रमाणित भएपछि उनीविरुद्ध जबर्जस्ती करणी र मानव बेचबिखनमा मुद्दा चल्यो। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।